झाडापखालाले सिरहामा एक बालिकाको मृत्यु, १२ जना प्रभावित - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 social Socity झाडापखालाले सिरहामा एक बालिकाको मृत्यु, १२ जना प्रभावित
झाडापखालाले सिरहामा एक बालिकाको मृत्यु, १२ जना प्रभावित
गोलबजारा, २६ बैशाख । सिरहाको कचनारिमा झाडा पखालाका कारण एक बालिकाको मृत्यु भएको छ, भने १२ जना विरामी परेका छन् । झाडा पखालाको प्रकोप फैलिएपछि बरियारपट्टी गाउँपालिका–१ कचनारि नरगीटोलका रामउदगार सदय का १० वर्षिया छोरी कबिताको मृत्यु भएको हो । आइतबारबाट फैलिएको झाडापखालाबाट मंगलबारसम्म १२ जना प्रभावित हुन पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले जानकारी दिए ।
झाडा पखाला फैलिएपछि गाउँले त्रसित छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गर्मीको बेलामा यस्तो हुन सक्ने भन्दै प्रकोप नभएको बताए भन्दै आतिनु पर्ने अवस्था नरहेको जनाए । डा. दासले अहिले नै यहि हो भन्न सक्ने अवस्था नभएपनि गर्मीका कारण वा पानीका कारण पनि यस्ता प्रकोप देखिन सक्ने बताए ।
सदयको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ । ढिलोगरी अस्पताल ल्याइपु¥याएकाले उनको मुत्यु भएको जिल्ला अस्पताल सिरहाले जनाएको छ । विरामीमध्ये पाँच जनाको नवराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एकजना लाहानम अस्पताल, ६ जनाको जिल्लको फोकल पर्सन सहित स्थानीय टोलीले उपचार गरिरहेको छ । उनीहरु सवैको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
एकजनलाई भारततर्फ उपचारको लागि लगिएको स्थानीय कमलेस यादवले जानकारी दिए । हिजोसम्म सात जनामात्रमा यस्तो प्रकोप देखिएको थियो । मंगलबार विहान थप पाँच जनामा झाडापखाला लागेको प्रमुख डा. दासले जानकारी दिए । उनीहरुको पनि अवस्था सामान्य छ । विरामीमा पेट दुख्ने, बान्ता हुने र पखाला लाग्ने लक्षण देखिएका छन् । झाडा पखालाबाट बालबालिका सवैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन् । झाडापखाला नियन्त्रणमा नआएपनि आतिनु पर्ने अवस्था नरहेको डा. दासले जनाए । उनले आफ्ने टोली त्यही रहेको र आवश्यक पर्दा जुनसुकै वेला जनशक्ति परिलान गर्न सकिने बताउनु भयो । उनले मंगलबार साँझपख नै त्यहाँ रहेको आफ्ना प्रतिनिधीसँग जानकारी लिदा अवस्था सामान्य बन्दै गएको बताए ।